‘गैरकम्युनिष्ट कर्मचारीको वायोडाटा लिँदै सरकार, लेवि नतिर्ने तारोमा’ (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
‘गैरकम्युनिष्ट कर्मचारीको वायोडाटा लिँदै सरकार, लेवि नतिर्ने तारोमा’ (भिडियो)
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द पौडेलले वर्तमान सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । गैरकम्युनिष्ट कर्मचारीलाई छानिछानि तारो बनाएर जिम्मेवारीविहीन बनाउने र दुःख दिने गरिएको उनको आरोप छ । उनले प्रमाणका रूपमा आफूसँग दुईजना सरकारी कार्यालयका हाकिम आएर गुनासो गरेका बताए ।
गैरकम्युनिष्ट कर्मचारीको वायोडाटा लिने र विगतमा नेविसंघमा भएका र अहिले नेकपालाई लेवि नतिरेका कर्मचारीमाथि सरकारले गलत रवैया अपनाएको उनले आरोप लगाए ।
आईतबार विपी कोइरालाको १ सय ५ औं जयन्तिको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले वर्तमान सरकारले हुकुमी शासन चलाउन सुरू गरेको उनको आरोप छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारले नागरिक स्वतन्ता समेत हनन् हुनेगरी सबै संवैधानिक निकायलाई समेत निकम्मा बनाउने काममा लागिपरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाए।
काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सबैभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारले धावा बोलेको भन्दै लोकतन्त्र गम्भीर खतरामा पर्ने संभावना रहेको बताए ।
सरकारप्रति नेता द्वय निकै आक्रामक देखिए ।
गैर कम्युनिष्ट कर्मचारीको वायोडाटा कसरी लिँदैछ सरकारले ? पौडेलको मुखबाटै सुन्नुस्ः